Socdaalka Thanksgiving-ka ayaa la filayaa inuu kor u kaco ilaa 20 milyan oo rakaab ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Socdaalka Thanksgiving-ka ayaa la filayaa inuu kor u kaco ilaa 20 milyan oo rakaab ah
Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
U diyaargarow safarka Thanksgiving
Maamulka Amniga Gaadiidka ee Mareykanka (TSA) ayaa baaray tirada ugu badan ee rakaab ah hal maalin gudaheed usbuucii hore tan iyo markii uu cudurku billowday. Waxay filayaan wakhti aad u mashquul badan oo Thanksgiving ah, kaas oo la tixgeliyo laga bilaabo Noofambar 19 ilaa Noofambar 28.
TSA ayaa sheegay in ay haystaan ​​shaqaale ku filan oo ay ku maareeyaan 20 milyan oo rakaab ah oo la filayo in ay ku safri doonaan goobtooda amniga inta lagu jiro xilliyada safarka ee la cayimay. Maalinta ugu safarka badan taariikhda TSA waxay ahayd Axadii ka dib Thanksgiving ee 2019 kahor masiibada. Muddadaas 2.9 milyan oo rakaab ah ayaa shaqaalaha TSA ay baadhaan.
Sida caadiga ah maalmaha ugu mashquulka badan Socdaalka Thanksgiving waa Talaadada iyo Arbacada ka horreysa Thanksgiving Khamiista iyo Axadda ka dib Thanksgiving.
Maamulaha TSA David Pekoske ayaa yiri: "Waxaan filaynaa in safarka uu aad ugu dhow yahay heerarkii masiibada ka hor fasaxan, waxaana nala siiyay shaqaale waxaanan u diyaargarownay safarrada fasaxa ah. Waxaan geynay tignoolajiyada kor u qaadeysa awooda ogaanshaha yareyneysa xiriirka jirka, waxaana sidoo kale muhim ah in rakaabka loo diyaariyo talooyinka safarka ee khibradda isbaarada ugu hufan. Iyada oo guud ahaan heerarka tallaalku ay soo hagaagayaan waddanka oo dhan iyo kalsoonida weyn ee safarka caafimaadka leh, waxaa jiri doona dad badan oo safri doona si aad u sii qorsheysato, u digtoonow oo ku celceli naxariista.
"Waxaan ku talinayaa in dadka socotada ah ay u fiirsadaan tilmaamaha ay saraakiisha TSA-da ka bixinayaan koontaroolka. Waxa laga yaabaa inay ku jiheeyaan khad gaaban ama ay kugu hagayaan qof si tartiib tartiib ah u socda. Waxaana laga yaabaa inay ku siinayaan talo yaraynaysa suurtogalnimada inaad u baahan tahay hoos-u-dhac.
TSA waxay ku talisaa socotada inay oggolaadaan waqti dheeraad ah safarka fasaxa oo ay yimaadaan ka hor inta aan caadiga ahayn. Waxay sidoo kale bixiyaan talooyinkan:
Dadka safarka ah, shaqaalaha TSA, iyo shaqaalaha kale ee duulista waxa looga baahan yahay inay xidhaan maaskaro sida uu dhigayo amarka maaskaro ee federaalka. Qof kasta oo ku sugan garoomada diyaaradaha, basaska iyo saldhigyada tareenada, diyaaradaha rakaabka, gaadiidka dadweynaha, tareenada rakaabka, iyo basaska wadada ka baxa ee ku shaqeeya wadooyin go'an waa in ay xidhaan maaskaro. Haddii musaafurku aanu keenin maaskaro, sarkaalka TSA wuxuu u soo bandhigi doonaa maaskaro qofkaas goobta baaritaanka.
Si fiican u xidho
U diyaari amniga marka aad xirxiraneyso oo hubi in aysan ku jirin shay la mamnuucay oo shandadaha ku jira. Ogow cuntooyinka ay tahay inay galaan bac la hubiyay. Dufanka, maraqa karamberriga, khamriga, macaanka, iyo waxyaalaha lagu kaydiyo waa inay dhamaantood galaan bac la hubiyay, sababtoo ah maaha kuwo adag. Haddii aad daadin karto, buufin, faafi, ku shub ama ku shub, markaa ma aha mid adag oo waa in lagu dhejiyaa bac la hubiyay. Sida had iyo jeer, rakaabku waxay keeni karaan cuntooyinka adag sida keega iyo alaabta kale ee la dubay iyagoo soo maraya isbaarooyinka.
Waa caadi in la keeno gacmo nadiifiyaha. TSA waxay hadda u oggolaanaysaa dadka safarka ah inay la yimaadaan hal weel oo dareere ah gacmaha nadiifiyaha ah ilaa 12 wiqiyadood oo rakaab ah oo ku jira bacaha lagu qaado ilaa ogeysiis dambe. Rakaabku waxa ay filan karaan in dhammaan weelasha waaweyn ee 3.4 wiqiyadood ay u baahan doonaan in si gaar ah loo baaro, taas oo ku dari doonta wakhti khibraddooda isbaarada. Dadka socotada ah sidoo kale waa loo ogol yahay inay la yimaadaan masaxaha khamriga ama tirtirayaasha ka-hortagga bakteeriyada iyagoo sita, shandad la hubiyay, ama labadaba.
Is diwaangeli ama cusboonaysii xubinnimada TSA PreCheck®
Shakhsiyaadka helay TSA PreCheck shan sano ka hor hadda waxay awoodaan inay dib u cusboonaysiiyaan xubinimadooda onlayn qiimo dhimis. Shakhsiyaadka aan haysan TSA PreCheck waa inay hadda is-diiwaangeliyaan si ay u helaan dheefaha TSA PreCheck, oo laga heli karo in ka badan 200 garoonnada diyaaradaha ee Maraykanka. Dadka safarka ah ee iska diiwaan galiyay barnaamijka socdaalka ee la aamini karo, sida TSA PreCheck, uma baahna inay iska saaraan kabaha, laptop-yada, dareeraha, suumanka iyo jaakadaha fudud. Xubinnimada TSA PreCheck hadda aad ayay uga qiimo badan tahay sidii hore maxaa yeelay waxay yaraynaysaa meelaha la taaban karo inta lagu jiro cudurka faafa waxayna dadka socotada gelisaa khadadka amniga ee ay ku yar yihiin socotada oo si degdeg ah u dhaqaaqa, taasoo dhiirigelisa kala fogaanshaha bulshada. Si aad u hesho barnaamijka socotada ah ee la aamini karo ee ku habboon baahiyahaaga safarka, isticmaal qalabka isbarbardhigga socdaalka ee la aaminsan yahay ee DHS.
Codso taageerada rakaabka
Dadka safarka ah ama qoysaska rakaabka ah ee naafada ah iyo/ama xaaladaha caafimaad waxay wici karaan khadka caawinta ee TSA Cares 855-787-2227 ugu yaraan 72 saacadood ka hor inta aan la duulin su'aalo kasta oo ku saabsan siyaasadaha baarista, hababka iyo si loo ogaado waxa laga filayo isbaarada amniga. TSA Cares waxay sidoo kale qabanqaabisaa caawimada barta kontoroolka.
Su'aalahaaga ka jawaab ka hor intaadan tagin garoonka diyaaradaha
Waydii TSA. Socdaalayaashu waxay heli karaan gargaar wakhtiga dhabta ah iyagoo u soo gudbiya su'aalahooda iyo faallooyinkooda @AskTSA Twitter ama Facebook Messenger. Dadka safarka ah waxay sidoo kale ka heli karaan Xarunta Xiriirka TSA 866-289-9673. Shaqaaluhu waxay diyaar u yihiin 8 subaxnimo ilaa 11 galabnimo maalmaha shaqada iyo 9 subaxnimo ilaa 8 galabnimo maalmaha sabtida / sabtida; iyo adeeg toos ah ayaa la heli karaa 24 saacadood maalintii, todobada maalmood ee usbuuca.
Hubi inaad haysato aqoonsi sax ah
Kahor intaadan tagin garoonka, dadka safarka ah waa inay hubiyaan inay haystaan ​​aqoonsi la aqbali karo. Xaqiijinta aqoonsigu waa tallaabo muhiim u ah habka baarista amniga.
Ka war hay
Xusuusin ahaan, wacyiga dadwaynaha ayaa fure u ah taageeridda dadaallada amniga ee TSA. Socotada waxaa lagu dhiirigelinayaa inay ka warbixiyaan dhaqdhaqaaqyada laga shakiyo, oo xusuusnow: Haddii aad wax aragto, dheh Wax.